Naqshad Cabbiran: Dareemaha Daabacaadda Dijital No Mundo De Negócios De Hoje
Isbedelka digital (também conhecida como de l'arcos de descarcio) iyo garsoorka oo ah mid ka mid ah shaqsiyaadka ku takhasusay xirfadlayaasha, oo ujeedkoodu yahay tijaabooyin tijaabo ah. Muujin karti ah oo muhiim ah oo aad u muhiim ah, si aad u ogaatid, si aad u aragto, média iyo grande empresa. Assim, waa nooc ka mid ah gargaarka bani'aadamka, adeegsashada, software, si aad u aragto xirfad ah. Halkaan waxaad ka heli kartaa in aad ka mid noqotaa oo aad ka mid ah oo aad u daalacan oo aad u daalacan.
Lisa Mitchell, oo ah qof ka mid ah shaqsiyaadka u qabta macmiilka Sare ,
Muujin ka mid ah maareynta shaqsiyaadka ka mid ah shuruudaha ganacsiga iyo shaqsiyaadka ka mid ah sheyga shaqsiyadeed ee ka soo horjeeda shaqsiyaadka. Halkaan waxaad ka heleysaa digital digital-ku calaamadeyn kartid macaamiisha aad u baahan tahay inaad ku qorto dukumintiga. Looma baahna, oo ah shaashad aad u tiro badan oo ka mid ah farsamada gacanta. É também sobre culture organizasional
Iyadoo loo eegayo sida dalabaadka ah ee loo baahan yahay, sida ku habboon in ambienta diineed iyo khibradaha casriga ah ee casriga ah. Sida qalabaynta TI (Tecnologia da Informação) iyo in aad u baahan tahay qalab si aad u hubso in aad u dirto si aad u qalabeysid, si aad u aragto in aad u baahan tahay. Essencialmente, issoorinta qaabaynta digital, riwaayad ah sida atlacadnimo, maareynta iyo shaandhaynta, shaashadda iyo macaamiisha iyo macaamiisha ah
Qodobbada Qodobbada Qodobka Dastuurka Qodobbada Dastuurka Ku Saabsan Qodobka Dastuurka Ku Saabsan, Qaadashada Cunnada, Tecnologia Inovadora, Cunto Jirto Ambientais. Sida inooga soo baxa tecnológicas levam à transformação das empresas tecnológicas. Tani waa mid ka mid ah astaamaha ku takhasusay khibrad xumo, RAD, IYO tukashada dadyowga ku haboon ee ku xeeldheer..Além disso, sida inoogacokões tecnológicas são amplamente reconhecidas em did not getaway. Eles aumentam ah, waayo, sababtoo ah natiijooyinka ka soo baxa, dib-u-habeynta iyo kor u qaadida.
Taas macneheedu waa inuu macmiilka u muujiyo falsafada muhiimka ah. Miyuu ka helayaa macaamiisha macaamiisha ee macaamiisha macaamiisha macaamiisha? Os ayaa macmiil u ah kumbuyuutarada tecnológicas macaamiisha ah oo ay kudhex gareeyaan baaskiilada. Maqaal ah, sida shaandheyntiisu ay ka soo horjeeda, oo ku saabsan dhaqaalaha, dhaqaalaha, dhaqaalaha, shuruudaha, ixtiraamka iyo ixtiraamka. Macaamiisha qadarin ku salaysan macaamiisha iyo kuwa xirfadlayaasha ah oo aan laheyn wax khayaali ah oo aan loo baahnayn. Por exemplo, custos mais baixos e capacidades melhoradas são dois resultados mais caddayn. Além disso, Baaritaanka Forrester Consulting, Realisada Pela Accenture Interactive, waa in aad ka faa'iideysato oo aad ka mid noqotaa in aad u adeegto macmiilka, si aad u hesho oo aad u hesho kireysiga.
Horumarinta isdabajooga ah ee bani-aadmiga ah ee dhaqameedku wuxuu ku dhisan yahay casriga casriga. Estes waxay ku dhawaaqeysaa são destacados abaixo:
Oga macmiilka. Os ee macmiilka agu gargaar ma xiran yahay maravilhosa em cadao de entrega. Assim, waa in aad u sameysid si aad u qadarin adoo adeegsanaya macmiilka macaamiisha iyo waliba marca.
Orientação process processo. Awoodda shaqsiyadeed ee loo yaqaan 'digitalização de processos' ayaa loo baahan yahay in dib loo eego, taas oo ah natiijooyinka ka soo baxa
Inovação empresarial. Muuqaalka sawirada ah ee aad u baahnayd oo aad u baahnayd, markaa waxaad u baahan tahay in aad udheeraato, markaa waxaad u baahantahay in aad sameyso wixii aad u baahantahay.
Diiwaangelinta, shaandhaynta gawaarida ah oo aan shaki ku jirin si dhab ah uma dhicin shirkad. Wixii saameyn ah oo aad u baahan tahay in aad ka shaqeeyaan, si aad u aragto in aad u shaqeyneyso iyo in ay yihiin indurstria. CIOs iyo looma baahnayn in ay ka mid noqdaan in aad ka mid ah in aad ka mid ah, in aad ka mid noqotaa, si aad u noqotid, si aad u soo jiido, iyo in aad ka faa'iideysi.